Umthetho wabucala - Sorrento Therapeutics
Umhla wokuqalisa: nge-14 kaJuni ngo-2021
Lo Mgaqo-nkqubo waBucala (“umthetho wabucala”) icacisa ukuba njani Sorrento Therapeutics, Inc. kunye namahlakani ayo kunye nabancedisi bayo (ngokudibeneyo, "Sorrento, ""us, ""we, "Okanye"yethu”) iqokelela, isebenzisa, kwaye yabelane ngeenkcukacha zakho zobuqu ngokunxibelelene newebhusayithi, usetyenziso, kunye neengosi esizisebenzisayo ezinxibelelana nalo Mgaqo-nkqubo waBucala (ngokudibeneyo, “site"), amaphepha ethu eendaba ezentlalo, kunye nonxibelelwano lwethu lwe-imeyile (ngokudibeneyo, kunye neSayithi, "inkonzo").
Lo Mgaqo-nkqubo waBucala awusebenzi kwiinkcukacha zobuqu onokuthi unike zona okanye uya kubonelela kuthi kwiisetingi ngaphandle okanye ngeSayithi. Ukwahluka okanye imigaqo-nkqubo yabucala eyongezelelweyo inokusebenza kulwazi lobuqu oluqokelelwa ngenye indlela yi-Sorrento, njengokunxibelelana nolingo lwethu lwezonyango, iinkonzo zelebhu yesigulana, okanye iimveliso zeCOVISTIX. I-Sorrento inelungelo, nangaliphi na ixesha, ukulungisa lo Mgaqo-nkqubo waBucala. Ukuba senza uhlaziyo olutshintsha indlela esiqokelela ngayo, esiyisebenzisayo, okanye esabelana ngayo ngolwazi lomntu siqu, siya kuluthumela olo tshintsho kulo Mgaqo-nkqubo waBucala. Kuya kufuneka ujonge lo Mgaqo-nkqubo waBucala ngamaxesha athile ukuze uhlale usexesheni kweyona migaqo-nkqubo yethu yangoku kunye nezenzo. Siya kuqaphela umhla wokuqalisa wenguqulelo yamva nje yoMgaqo-nkqubo wethu waBucala phezulu kulo Mgaqo-nkqubo waBucala. Ukusebenzisa kwakho okuqhubekayo kweNkonzo emva kokuthumela utshintsho kuthetha ulwamkelo lwakho lolo tshintsho.
Ulwazi Lobuqu Olunikezelayo. Sinokuqokelela ezi nkcukacha zobuqu zilandelayo obonelela ngazo ngeNkonzo yethu okanye ngenye indlela:
Iinkcukacha zoqhakamshelwano, njengegama, idilesi ye-imeyile, idilesi yokuposa, inombolo yefowuni, kunye nendawo.
Ulwazi lobuchwephesha, njengesihloko somsebenzi, umbutho, inombolo ye-NPI, okanye indawo yobungcali.
Ulwazi lweakhawunti, njengegama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha olenzileyo ukuba ufikelela kwi-portal yomxhasi wethu, kunye nayo nayiphi na enye idatha yobhaliso.
Ezikhethwayo, njengokukhetha kwakho ukuthengisa okanye unxibelelwano.
Communications, kuquka ulwazi olunxulumene nemibuzo osibuza yona kunye nayo nayiphi na ingxelo oyinikayo xa unxibelelana nathi.
Ulwazi lomceli, njenge CV, CV, Employers, kunye nezinye iinkcukacha onokuthi uzinike xa ufaka isicelo somsebenzi okanye ithuba nathi okanye ucela ulwazi ngamathuba engqesho ngeNkonzo.
Olunye ulwazi okhetha ukuyinikezela kodwa ayidweliswanga ngokuthe ngqo apha, esiya kuyisebenzisa njengoko kuchaziwe kulo Mgaqo-nkqubo waBucala okanye njengoko kuchaziwe ngenye indlela ngexesha lokuqokelela.
Ulwazi lomntu siqu luqokelelwe ngokuzenzekela. Thina, ababoneleli beenkonzo zethu, kunye namaqabane ethu eshishini banokungena ngokuzenzekelayo ulwazi malunga nawe, ikhompyuter yakho, okanye isixhobo sakho esiphathwayo kunye nomsebenzi wakho ekuhambeni kwexesha kwiNkonzo yethu nakwezinye iisayithi kunye neenkonzo ze-intanethi, ezifana:
Ulwazi lomsebenzi we-Intanethi, njengewebhusayithi oyindwendwele ngaphambi kokukhangela kwiNkonzo, amaphepha okanye izikrini ozijongileyo, ixesha elingakanani ochithe kwiphepha okanye isikrini, iindlela zokuhamba phakathi kwamaphepha okanye izikrini, ulwazi malunga nomsebenzi wakho kwiphepha okanye isikrini, amaxesha okufikelela, kunye ixesha lofikelelo.
Ulwazi ngesixhobo, njengekhompyutha yakho okanye uhlobo lwenkqubo yokusebenza yesixhobo esiphathwayo kunye nenombolo yoguqulelo, umnikezeli ongenazingcingo, umenzi kunye nemodeli, uhlobo lwebrawuza, ukulungiswa kwesikrini, idilesi ye-IP, izichazi ezohlukileyo, kunye nolwazi lwendawo gabalala njengesixeko, ilizwe, okanye ummandla wejografi.
Iicookies kunye neeTekhnoloji ezifanayo. Njengeenkonzo ezininzi ze-intanethi, sisebenzisa iikuki kunye nobuchwephesha obufanayo ukuququzelela enye yengqokelela yethu yedatha ezenzekelayo, kuquka:
cookies, eziziifayile ezibhaliweyo ezigcinwe ziiwebhusayithi kwisixhobo sondwendwe ukuze zichonge ngokukhethekileyo isikhangeli sondwendwe okanye ukugcina ulwazi okanye useto kwibhrawuza ngenjongo yokukunceda uhambe phakathi kwamaphepha ngokufanelekileyo, ukhumbula izinto ozikhethayo, ukwenza umsebenzi, ukusinceda siqonde umsebenzi womsebenzisi. kunye neepateni, kunye nokuququzelela intengiso ye-intanethi. Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi, nceda undwendwele yethu Umgaqo-nkqubo we-cookie.
Iibhikhoni zewebhu, ekwaziwa ngokuba ziithegi ze-pixel okanye ii-GIFs ezicacileyo, ezidla ngokusetyenziswa ukubonisa ukuba iphepha lewebhu okanye i-imeyile ifikelelwe okanye yavulwa, okanye umxholo othile ubujongiwe okanye ucofiwe, ngokuqhelekileyo ukuqulunqa izibalo malunga nokusetyenziswa kwewebhusayithi kunye nempumelelo yamaphulo okuthengisa.
Ulwazi lomntu siqu lufunyenwe kuMaqela eSithathu. Sisenokufumana iinkcukacha ngawe ezisuka kubantu besithathu, abafana namaqabane ethu oshishino, abaxumi, abathengisi, abancedisi kunye nabo sisebenzisana nabo, ababoneleli ngedatha, amaqabane entengiso, kunye nemithombo efumanekayo esidlangalaleni, njengamaqonga eendaba ezentlalo.
Ukudluliselwa. Abasebenzisi beNkonzo banokufumana ithuba lokuthumela oogxa babo okanye abanye oonxibelelwano kuthi kwaye babelane ngolwazi lwabo loqhagamshelwano. Nceda ungasiniki iinkcukacha zoqhagamshelwano zomnye umntu ngaphandle kokuba unemvume yokwenza oko.
Iinkcukacha zobuqu ezibuthathaka. Ngaphandle kokuba sikucela ngokukodwa, siyakucela ukuba ungasiniki naluphi na ulwazi olubuthathaka (umzekelo, ulwazi olunxulumene nemvelaphi yobuhlanga okanye yobuhlanga, iimbono zopolitiko, inkolo okanye ezinye iinkolelo, impilo, i-biometrics okanye iimpawu zofuzo, imvelaphi yolwaphulo-mthetho okanye ubulungu bombutho wabasebenzi. ) ngeNkonzo okanye ngeNkonzo, okanye ngenye indlela kuthi.
UKUSETYENZISWA KOLWAZI LOBUQU
Singasebenzisa iinkcukacha zakho ngezi njongo zilandelayo kwaye njengoko kuchazwe ngenye indlela kulo Mgaqo-nkqubo waBucala okanye ngexesha lokuqokelela.
Ukubonelela ngeNkonzo. Singasebenzisa iinkcukacha zakho ukuze:
ukubonelela kunye nokusebenza ngeNkonzo kunye neshishini lethu;
esweni kwaye uphucule amava akho kwiNkonzo;
yenza kwaye ugcine iakhawunti yakho kwizicelo zethu okanye iiphothali;
ukuphonononga kwaye uphendule kwizicelo okanye imibuzo yakho;
ukunxibelelana nawe malunga neNkonzo kunye nolunye unxibelelwano olunxulumeneyo; kwaye
bonelela ngezinto, iimveliso, kunye neenkonzo ozicelayo.
Uphando nophuhliso. Singasebenzisa ulwazi lwakho ngeenjongo zophando kunye nophuhliso, kubandakanya ukuphucula iNkonzo, ukuqonda kunye nokuhlalutya iindlela zokusetyenziswa kunye nezinto ezikhethwa ngabasebenzisi bethu, kwaye siphuhlise iimpawu ezintsha, ukusebenza kunye neenkonzo. Njengenxalenye yale misebenzi, sisenokwenza idatha edityanisiweyo, engachazwanga, okanye enye engaziwa kwiinkcukacha zobuqu esiziqokelelayo. Senza iinkcukacha zobuqu zibe yidatha engaziwa ngokususa iinkcukacha ezenza iinkcukacha zibonakale kuwe. Sinokusebenzisa le datha engaziwa kwaye sabelane ngayo namaqela esithathu ngeenjongo zoshishino ezisemthethweni, kuquka ukuhlalutya nokuphucula iNkonzo kunye nokukhuthaza ishishini lethu.
Ukuthengisa ngokuthe ngqo. Singakuthumelela ezinxulumene ne-Sorrento okanye olunye unxibelelwano lwentengiso ngokuthe ngqo njengoko kuvunyelwe ngumthetho. Ungaphuma kunxibelelwano lwethu lwentengiso njengoko kuchaziwe kwicandelo elithi "Ukhetho lwakho" ngezantsi.
Intengiso-eSekwe kwiNtengiso. Singasebenza neenkampani zentengiso yomntu wesithathu kunye neenkampani zemidiya yoluntu ukusinceda sibhengeze ishishini lethu kunye nokubonisa iintengiso kwiNkonzo yethu nakwezinye iisayithi. Ezi nkampani zinokusebenzisa iikuki kunye nobuchwepheshe obufanayo ukuqokelela ulwazi malunga nawe (kubandakanya idatha yesixhobo kunye nedatha yokwenza kwi-intanethi echazwe ngasentla) ekuhambeni kwexesha kwiNkonzo yethu kunye nezinye iisayithi kunye neenkonzo okanye ukusebenzisana kwakho nee-imeyile zethu, kwaye zisebenzise olo lwazi ukwenza iintengiso bacinga ukuba uya kuba nomdla kuwe. Unokufunda ngakumbi malunga nokhetho lwakho lokunciphisa iintengiso ezisekelwe kwinzala kwicandelo elingezantsi elithi "Ukhetho lwakho".
Ukufunwa kwabasebenzi kunye nokuPhuculwa kwezicelo. Ngokunxulumene nemisebenzi yethu yokugaya okanye izicelo zakho okanye imibuzo malunga namathuba engqesho kunye ne-Sorrento ngeNkonzo, sinokusebenzisa ulwazi lwakho lobuqu ukuvavanya izicelo, ukuphendula imibuzo, ukuphonononga iziqinisekiso, iimbekiselo zoqhagamshelwano, ukujonga imvelaphi kunye nolunye uphononongo lokhuseleko, kwaye ngenye indlela. sebenzisa ulwazi lomntu siqu kwi-HR kunye neenjongo ezinxulumene nomsebenzi.
Ukuthobela iMithetho neMigaqo. Siza kusebenzisa ulwazi lwakho lobuqu njengoko sikholelwa ukuba kufanelekile okanye kufanelekile ukuthobela imithetho esebenzayo, izicelo ezisemthethweni, kunye nenkqubo yomthetho, efana nokuphendula iisamani okanye izicelo ezivela kwabasemagunyeni bakarhulumente.
Ukuthotyelwa, uThintelo lobuQhinga, kunye noKhuseleko. Sinokusebenzisa iinkcukacha zakho kwaye sizibhengeze kwabomthetho, abasemagunyeni kurhulumente, namaqela abucala njengoko sikholelwa ukuba kuyimfuneko okanye kufanelekile: (a) ukugcina ukhuseleko, ukhuseleko, kunye nesidima seNkonzo yethu, iimveliso kunye neenkonzo, ishishini, uvimba weenkcukacha kunye ezinye izinto zeteknoloji; (b) khusela amalungelo ethu, akho okanye abanye, ubumfihlo, ukhuseleko okanye impahla (kuquka ukwenza nokukhusela amabango asemthethweni); (c) siziphicothe iinkqubo zethu zangaphakathi zokuthobela iimfuno zomthetho nezekhontrakthi kunye nemigaqo-nkqubo yangaphakathi; (d) ukunyanzelisa imigaqo nemiqathango elawula iNkonzo; kwaye (e) athintele, achonge, aphande kwaye athintele ubuqhophololo, obunobungozi, obungagunyaziswanga, obungekho mthethweni okanye obungekho mthethweni, kubandakanywa uhlaselo lwekhompyutha nobusela bezazisi.
Ngemvume Yakho. Kwezinye iimeko sinokukucela ngokukhethekileyo imvume yakho yokuqokelela, ukusebenzisa, okanye ukwabelana ngolwazi lwakho lobuqu, njengaxa kuyimfuneko ngokomthetho.
UKWABELANA NGENKCUKACHA YOMNTU
Sinokwabelana ngolwazi lwakho lobuqu kunye namaziko kunye nabantu abadweliswe ngezantsi okanye njengoko kuchazwe ngenye indlela kulo Mgaqo-nkqubo waBucala okanye kwindawo yokuqokelela.
Iinkampani eziyeleleneyo. Sisenokwabelana ngolwazi oluqokelelweyo malunga nawe nalo naliphi na ilungu leqela lethu leenkampani, kubandakanywa nabasebenzisana nabo, inkampani yethu yokugqibela, kunye nenkxaso yayo. Umzekelo, siya kwabelana ngolwazi lwakho lobuqu kunye neenkampani zethu ezinxulumeneyo ukuze sikubonelele ngeemveliso kunye neenkonzo zethu, apho ezinye iinkampani ngaphakathi kweqela lethu zenza amacandelo eenkonzo ezipheleleyo ezinikezelayo.
Ababoneleli ngeNkonzo. Sabelana ngolwazi lobuqu namaqela esithathu kunye nabantu abenzela imisebenzi kwaye basinceda siqhube ishishini lethu. Umzekelo, ababoneleli ngenkonzo basinceda senze ukusingatha iwebhusayithi, iinkonzo zogcino, ulawulo lwedathabheyisi, uhlalutyo lwewebhu, ukuthengisa, kunye nezinye iinjongo.
Amaqabane eNtengiso. Sisenokwabelana ngolwazi lobuqu oluqokelelweyo malunga nawe namaqela esithathu esisebenzisana nawo kumaphulo entengiso, ukhuphiswano, izibonelelo ezikhethekileyo okanye eminye iminyhadala okanye imisebenzi enxulumene neNkonzo yethu, okanye eqokelela ulwazi malunga nomsebenzi wakho kwiNkonzo kunye nezinye iinkonzo ze-Intanethi sincede sibhengeze iimveliso kunye nenkonzo yethu, kunye/okanye sisebenzise uluhlu lwabathengi abangxamisekileyo esababelana nabo ukuhambisa iintengiso kuwe nakubasebenzisi abafanayo kumaqonga abo.
UShishino lokuTshintshela. Sinokubhengeza iinkcukacha zobuqu eziqokelelweyo malunga nawe namaqela esithathu ngokunxulumene nayo nayiphi na intengiselwano yeshishini (okanye intengiselwano enokwenzeka) ebandakanya ukudityaniswa, ukuthengiswa kwezabelo zenkampani okanye ii-asethi, ukuxhaswa ngemali, ukufunyanwa, ukudityaniswa, uhlengahlengiso, ukwahlukana, okanye ukuchithwa kwazo zonke okanye inxalenye. yeshishini lethu (kubandakanywa nokungabinamali okanye iinkqubo ezifanayo).
Abasemagunyeni, ukuthotyelwa koMthetho, kunye nabanye. Sisenokuphinda siveze ulwazi oluqokelelweyo malunga nawe kunyanzeliso lomthetho, kumagunya karhulumente, kunye namaqela abucala, ukuba ukubhengeza kuyimfuneko ukuthobela nawuphi na umthetho osebenzayo okanye ummiselo, ngokuphendula iisamani, umyalelo wenkundla, uphando lukarhulumente, okanye enye inkqubo yezomthetho, okanye njengoko sikholelwa ukuba kuyimfuneko kuthotyelo kunye neenjongo zokukhusela ezichazwe kwicandelo elinesihloko esithi "Ukusetyenziswa kweeNkcukacha zoBuqu" ngasentla.
Abacebisi beeNgcali. Sinokwabelana ngolwazi lwakho lobuqu nabantu, iinkampani, okanye iifemu zobuchwephesha ezibonelela ngeSorrento ngeengcebiso kunye nokucebisana kwi-accounting, ulawulo, umthetho, irhafu, imali, ukuqokelelwa kwamatyala, kunye neminye imiba.
UKUTSHINTSHWA KWEZINGAZWE LOLWAZI LOBUQU
Ezinye iinkampani zeSorrento zikomkhulu eMelika, kwaye sinababoneleli ngenkonzo eUnited States nakwamanye amazwe. Ulwazi lwakho lobuqu lunokuqokelelwa, lusetyenziswe, kwaye lugcinwe eUnited States okanye kwezinye iindawo ezingaphandle kwelizwe lakho. Imithetho yabucala kwindawo esiphatha kuyo iinkcukacha zakho isenokungakhuseleki njengemithetho yabucala kwilizwe lakho. Ngokubonelela ngenkcazelo yakho yobuqu, apho umthetho osebenzayo uvumayo, uyavumelana ngokungqalileyo nangokucacileyo kolo dluliselo kunye nokusetyenzwa nokuqokelelwa, ukusetyenziswa, kunye nokuvezwa okuchazwe apha okanye kuyo nayiphi na imiqathango yenkonzo esebenzayo.
Abasebenzisi baseYurophu banokujonga icandelo elingezantsi elinesihloko esithi "Isaziso kubasebenzisi baseYurophu" ngolwazi olongezelelweyo malunga naluphi na ugqithiselo lweenkcukacha zakho.
Akukho ndlela yokudlulisela kwi-intanethi, okanye indlela yokugcina i-elektroniki, ikhuselekile ngokupheleleyo. Ngelixa sisebenzisa iinzame ezifanelekileyo ukukhusela ulwazi lwakho lobuqu kubungozi obuvezwa kukufikelela okungagunyaziswanga okanye ukufunyanwa, asinakuqinisekisa ngokhuseleko lweenkcukacha zakho.
EZINYE IWEbhsayithi NEENKONZO
INkonzo inokuqulatha amakhonkco kwezinye iiwebhusayithi kunye neenkonzo ze-intanethi eziqhutywa liqela lesithathu. La makhonkco ayilo uxhaso, okanye umelo esimanyaniswa nalo, nalo naliphi na iqela lesithathu. Ukongeza, umxholo wethu unokuqukwa kumaphepha ewebhu okanye iinkonzo ze-intanethi ezinganxulumananga nathi. Asizilawuli iiwebhusayithi zomntu wesithathu okanye iinkonzo ze-intanethi, kwaye asinaxanduva ngezenzo zabo. Ezinye iiwebhusayithi kunye neenkonzo zilandela imithetho eyahlukeneyo malunga nokuqokelela, ukusetyenziswa kunye nokwabelana ngolwazi lwakho lobuqu. Siyakukhuthaza ukuba ufunde imigaqo-nkqubo yabucala yezinye iiwebhusayithi kunye neenkonzo ze-intanethi ozisebenzisayo.
Kweli candelo, sichaza amalungelo kunye nokukhetha okukhoyo kubo bonke abasebenzisi.
Iimeyili zokukhuthaza. Unokuphuma kwii-imeyile ezinxulumene nokuthengisa ngokulandela ukuphuma okanye ukungabhalisi imiyalelo emazantsi e-imeyile, okanye ngokuqhagamshelana nathi njengoko kuchazwe ngezantsi. Ungaqhubeka ukufumana i-imeyile enxulumene nenkonzo kunye nezinye ezingezizo ukuthengisa.
cookies. Nceda undwendwele wethu Policy Cookie ufuna ulwazi olungolunye.
IiNtengiso zokuKhetha. Unganciphisa ukusetyenziswa kolwazi lwakho kwintengiso esekwe kwintengiso ngokuthintela iikuki zomntu wesithathu kwibhrawuza yakho, usebenzisa isikhangeli iplug-ins/extensions, kunye/okanye usebenzisa iisetingi zesixhobo sakho esiphathwayo ukunciphisa ukusetyenziswa kweID yentengiso ehambelana nayo. isixhobo sakho esiphathwayo. Ungaphinda uphume kwiintengiso ezisekelwe kwinzala kwiinkampani ezithatha inxaxheba kwezi nkqubo zilandelayo zokuphuma kushishino ngokundwendwela iiwebhusayithi ezidityanisiweyo: iNethiwekhi yeNtengiso yeNtengiso (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp), i-European Interactive Digital Advertising Alliance (kubasebenzisi baseYurophu - http://www.youronlinechoices.eu/), kunye neDigital Advertising Alliance (optout.aboutads.info). Okukhethwayo kokuphuma okuchazwe apha kufuneka kumiselwe kwisixhobo ngasinye kunye/okanye isikhangeli ofuna ukusisebenzisela sona. Nceda uqaphele ukuba nathi singasebenza neenkampani ezinikezela ngezazo iindlela zokuphuma okanye ezingathathi nxaxheba kwiindlela zokuphuma ezichazwe ngasentla, ngoko ke nasemva kokuphuma, usenokufumana iikuki kunye neentengiso ezisekelwe kumdla kwezinye. iinkampani. Ukuba uphuma kwiintengiso ezisekelwe kumdla, uya kuzibona iintengiso kwi-intanethi kodwa zingabalulekanga kangako kuwe.
Musa ukulandelela. Ezinye iibhrawuza zinokulungiswa ukuba zithumele iisiginali “Musa ukuKhangela” kwiinkonzo ze-intanethi ozindwendwelayo. Okwangoku asiphenduli ku-“Musa ukuKhangela” okanye imiqondiso efanayo. Ukuze ufunde ngakumbi malunga "Musa ukuKhangela," nceda undwendwele http://www.allaboutdnt.com.
Ukwala ukubonelela ngolwazi. Kufuneka siqokelele iinkcukacha zobuqu ukuze sinikezele ngeenkonzo ezithile. Ukuba awuboneleli ngolwazi oluceliweyo, sisenokungakwazi ukubonelela ngezo nkonzo.
ISAZISO KUBANTU ABASEBENZISI BAseYurophu
Ulwazi olunikwe kweli candelo lusebenza kuphela kubantu abakwiManyano yaseYurophu, kwiMmandla yezoQoqosho yaseYurophu, naseUnited Kingdom (ngokuhlangeneyo, “iYurophu").
Ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela, iireferensi "kwinkcazelo yobuqu" kulo Mgaqo-nkqubo waBucala zilingana "nedatha yomntu" elawulwa ngumthetho wokukhusela idatha yaseYurophu.
Controller. Apho kufanelekileyo, umlawuli wenkcazelo yakho yobuqu egutyungelwe ngulo Mgaqo-nkqubo waBucala ngeenjongo zomthetho wokhuseleko lwedatha yaseYurophu liqumrhu leSorrento elibonelela ngeSiza okanye iNkonzo.
Iziseko ezisemthethweni zokuLungiswa. Iziseko ezisemthethweni zokusetyenzwa kolwazi lwakho lobuqu njengoko kuchaziwe kulo Mgaqo-nkqubo waBucala kuya kuxhomekeka kuhlobo lolwazi lomntu kunye nomxholo othile esiwuqhubayo. Nangona kunjalo, iziseko ezisemthethweni esixhomekeke kuzo zichazwe kwitheyibhile engezantsi. Sixhomekeke kumdla wethu osemthethweni njengesiseko sethu esisemthethweni kuphela apho ezo zinto zinomdla zingathintelwanga kukuchaphazeleka kwakho (ngaphandle kokuba sinemvume yakho okanye ukusetyenzwa kwethu kuyafunwa okanye kuvunyelwe ngumthetho). Ukuba unemibuzo malunga nesiseko esisemthethweni sendlela esenza ngayo iinkcukacha zakho, qhagamshelana nathi ku ubumfihlo@sorrentotherapeutics.com.
Injongo yokuqhuba (njengoko kuchaziwe ngasentla kwicandelo elithi “Ukusetyenziswa koLwazi loBuqu”) Isiseko sezomthetho
Ukubonelela ngeNkonzo Ukucubungula kuyimfuneko ukwenza ikhontrakthi elawula ukusebenza kwethu kweNkonzo, okanye ukuthatha amanyathelo owacelayo ngaphambi kokubandakanya iinkonzo zethu. Apho singenako ukucubungula idatha yakho yobuqu njengoko kufuneka ukuba usebenze iNkonzo ngenxa yezizathu zekontrakthi, siqhuba ulwazi lwakho lobuqu ngale njongo ngokusekelwe kumdla wethu osemthethweni wokubonelela ngeemveliso okanye iinkonzo ozifumanayo kunye nezicelayo.
Uphando nophuhliso Ukucubungula kusekelwe kwimidla yethu esemthethweni ekwenzeni uphando kunye nophuhliso njengoko kuchazwe kulo Mgaqo-nkqubo waBucala.
Ukuthengisa ngokuthe ngqo Ukucubungula kusekwe kwimvume yakho apho imvume ifunwa ngumthetho osebenzayo. Apho loo mvume ingafunwayo ngumthetho osebenzayo, sijonga iinkcukacha zakho zobuqu ngezi njongo ngokusekelwe kwizinto esinomdla kuzo ekunyuseni umgangatho weshishini lethu kunye nokukubonisa umxholo ofanelekileyo.
Intengiso-eSekwe kwiNtengiso Ukucubungula kusekwe kwimvume yakho apho imvume ifunwa ngumthetho osebenzayo. Apho sithembele kwimvume yakho unelungelo lokuyirhoxisa nangaliphi na ixesha ngendlela ebonisiweyo xa uvuma okanye kwiNkonzo.
Ukusetyenzwa kwezicelo Ukucubungula kusekelwe kwimidla yethu esemthethweni ekwenzeni uphando kunye nophuhliso njengoko kuchazwe kulo Mgaqo-nkqubo waBucala.
Ukuthobela iMithetho neMigaqo Ukucubungula kuyimfuneko ukuthobela izibophelelo zethu ezisemthethweni okanye ngokusekelwe kwiminqweno yethu esemthethweni ekuqeshweni nasekuqeshweni. Kwezinye iimeko, ukusetyenzwa kungasekelwa kwimvume yakho. Apho sithembele kwimvume yakho unelungelo lokuyirhoxisa nangaliphi na ixesha ngendlela ebonisiweyo xa uvuma okanye kwiNkonzo.
Ukuthotyelwa, uThintelo lobuQhinga, kunye noKhuseleko Ukucubungula kuyimfuneko ukuthobela izibophelelo zethu ezisemthethweni okanye ngokusekelwe kwiminqweno yethu esemthethweni ekukhuseleni amalungelo ethu okanye abanye abantu, ubumfihlo, ukhuseleko, okanye impahla.
Ngemvume Yakho Ukuqhubekeka kusekwe kwimvume yakho. Apho sithembele kwimvume yakho unelungelo lokuyirhoxisa nangaliphi na ixesha ngendlela ebonisiweyo xa uvuma okanye kwiNkonzo.
Ukusetyenziswa kwiiNjongo eziNtsha. Singasebenzisa iinkcukacha zakho ngezizathu ezingachazwanga kulo Mgaqo-nkqubo waBucala apho kuvunyelwe ngumthetho kwaye isizathu siyahambelana nenjongo esiyiqokelele yona. Ukuba sifuna ukusebenzisa iinkcukacha zakho ngeenjongo ezingahambelaniyo, siya kukwazisa kwaye sicacise isiseko esisebenzayo somthetho.
Ukugcinwa. Siya kugcina idatha yakho yobuqu kangangoko kuyimfuneko ukuzalisekisa injongo yokuqokelela, kubandakanywa ngenjongo yokwanelisa naziphi na iimfuno zomthetho, accounting, okanye ingxelo, ukuseka nokukhusela amabango asemthethweni, ngeenjongo zokuthintela ubuqhophololo, okanye kangangoko kufuneka. ukuhlangabezana nezibophelelo zethu ezisemthethweni.
Ukumisela ixesha elifanelekileyo lokugcinwa kolwazi lobuqu, siqwalasela isixa, uhlobo, kunye novakalelo lweenkcukacha zobuqu, umngcipheko onokubakho wokwenzakala ngenxa yokusetyenziswa okungagunyaziswanga okanye ukubhengezwa kolwazi lwakho lobuqu, iinjongo esilungiselela ngazo iinkcukacha zakho kunye nokuba sinokuziphumeza ezo njongo ngezinye iindlela, kunye neemfuneko ezisemthethweni ezisebenzayo.
Akho Amalungelo. Imithetho yaseYurophu yokhuseleko lwedatha ikunika amalungelo athile malunga neenkcukacha zakho. Unokusicela ukuba senze la manyathelo alandelayo ngokunxulumene neenkcukacha zakho zobuqu esiziphetheyo:
Ukufikelela. Ukubonelela ngolwazi malunga nokusetyenzwa kwethu kolwazi lwakho lomntu kwaye sikunikeze ukufikelela kulwazi lwakho lobuqu.
Ukuchaneka. Hlaziya okanye ulungise izinto ezingachanekanga kwiinkcukacha zakho.
Susa. Cima iinkcukacha zakho.
U tshintshelo. Dlulisela ikopi efundeka ngomatshini yolwazi lwakho lobuqu kuwe okanye kumntu wesithathu ozikhethele wona.
Mthintelwe. Misela ukusetyenzwa kolwazi lwakho lomntu.
into. Ukuchasa ukuthembela kwethu kwimidla yethu esemthethweni njengesiseko sokusetyenzwa kwethu kolwazi lwakho lobuqu oluchaphazela amalungelo akho.
Ungazingenisa ezi zicelo ngokuqhagamshelana nathi apha ubumfihlo@sorrentotherapeutics.com okanye kwidilesi yokuposa edweliswe ngezantsi. Sinokucela ulwazi oluthile kuwe ukuze usincede siqinisekise ubuwena kwaye siqhube isicelo sakho. Umthetho osebenzayo unokufuna okanye usivumele ukuba sale isicelo sakho. Ukuba siyasala isicelo sakho, siya kukuxelela ukuba kutheni, ngokuxhomekeke kwizithintelo zomthetho. Ukuba ungathanda ukungenisa isikhalazo malunga nokusetyenziswa kwethu iinkcukacha zakho zobuqu okanye impendulo yethu kwizicelo zakho malunga neenkcukacha zakho, ungaqhagamshelana nathi okanye ungenise isikhalazo kumlawuli wokhuseleko lwedatha kwindawo yakho. Unokufumana umlawuli wakho wokukhusela idatha Apha.
Ukugqithiselwa kweDatha yeCross-Border. Ukuba sidlulisela iinkcukacha zakho kwilizwe elingaphandle kweYurophu kangangokuba kufuneka sisebenzise izikhuselo ezongezelelweyo kwiinkcukacha zakho phantsi kwemithetho yokhuseleko lwedatha yaseYurophu, siya kukwenza oko. Nceda uqhagamshelane nathi ngolwazi olongezelelweyo malunga naluphi na ugqithiselo olunjalo okanye ukhuseleko oluthile olusetyenzisiweyo.
Ukuba unemibuzo okanye iinkxalabo malunga nePolisi yethu yaBucala okanye nayiphi na enye into yabucala okanye umba wokhuseleko, nceda usithumelele i-imeyile ubumfihlo@sorrentotherapeutics.com okanye usibhalele kule dilesi ingezantsi: Sorrento Therapeutics, Inc.
4955 Abalawuli Indawo